အကူအညီ:Wiki Markup ဖြင့် ဇယားများထည့်ခြင်း မိတ်ဆက်/၂ - ဝီကီပီးဒီးယား
အကူအညီ:Wiki Markup ဖြင့် ဇယားများထည့်ခြင်း မိတ်ဆက်/၂
< အကူအညီ:Wiki Markup ဖြင့် ဇယားများထည့်ခြင်း မိတ်ဆက်
တိုင်၊ တန်းများ ထည့်ခြင်း
ဇယားအသစ်ထည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရှိပြီးသားကို တည်းဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဇယားကွက်ထဲက စာသားတွေအပြောင်းအလဲက စာဖတ်သူကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပြမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာသားပြောင်းတာတင်မကဘဲ လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
ဇယားတစ်ခုမှာ အောက်ပါ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတွေ ပါဝင်ပြီး အားလုံးကို သင် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဇယားအသစ် စတင်ဖို့အတွက် မဟုတ်ဘဲ ဇယားအမျိုးအစားကိုလည်း ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ – ဥပမာ၊ class="wikitable"။ ဇယားတစ်ခုရဲ့ "class" က အဲဒီဇယားမှာ ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ စံပုံစံကို သတ်မှတ်ပါတယ်။ အများဆုံးသုံးလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးအစားနှစ်ခုကတော့ "wikitable" နဲ့ "wikitable sortable" တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကတစ်ခုက ဖတ်ရှုသူတွေကို ကော်လံထိပ်က ခေါင်းစီးအကွက်ကို နှိပ်ပြီး ဇယားကွက်ကို စီလို့ ရပါတယ်။
အချက်အလက် ဒေတာ ဇယားကွက်တွေအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ သူ့ကိုtable start နဲ့ ဇယားရဲ့ ပထမဆုံး အတန်းကြားမှာ ထားပါတယ်။
Optional. ခေါင်းစီးဇယားကွက်တွေကို စာကြောင်းသစ်တစ်ကြောင်းစီမှာ အာမေဋိတ်သင်္ကေတ တစ်ခု (!) နဲ့ ထားနိုင်သလို စာကြောင်းတစ်ခုတည်းမှာ အာမေဋိတ်သင်္ကေတနှစ်ခု (!!) စီနဲ့ဆိုရင် ခေါင်းစီးဇယားကွက်များစွာ ထားနိုင်ပါသေးတယ်။
ဇယားအတန်းသစ် စတင်ဖို့ ဒေါင်လိုက်ဘား (|) တစ်ခုနဲ့ ဟိုက်ဖန်သင်္ကေတ (-) တစ်ခုကို သုံးပါတယ်။
ဇယားအတန်းတစ်ခုထဲမှာ ဇယားကွက်အသစ်တစ်ခု ထပ်တိုးဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြောင်းအသစ်မှာ ဒေါင်လိုက်ဘားတစ်ခု (|) နဲ့ ထားနိုင်သလို လိုင်းတစ်ခုတည်းမှာ ဇယားကွက်တွေ အများကြီး ထပ်တိုးဖို့အတွက် ဒေါင်လိုက်ဘားတန်း နှစ်ခု (||) ကို သုံးပါတယ်။
ဇယားတစ်ခုကို အဆုံးသတ်ဖို့ ဒေါင်လိုက်ဘားတစ်ခု (|) နဲ့ တွန့်ကွင်းအပိတ် (}) ကို စာကြောင်းအသစ်မှာ ထားလိုက်ရုံပါပဲ။
ရှိပြီးသား ဇယားတစ်ခုကို တည်းဖြတ်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါ ပုံစံနှစ်မျိုးကို တွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒေတာတွေကို ဇယားတစ်ခုပုံစံ စီစဉ်ထားမယ်
ဒီလိုပုံစံထားတာက ကော်လံနဲ့ ဇယားကွက်ထဲက စာနည်းနည်း (နံပါတ်တွေချည်း) သုံးမယ်ဆိုရင် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီဟာက ခလုတ်ကိုနှိပ်ရင် ဖန်တီးပေးမယ့် ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
အကွက်တွေကို ဒေါင်လိုက် စီထားမယ်
ကော်လံတွေများများ၊ ဇယားထဲက စာသားအရှည်တွေအတွက်ဆိုရင် ဇယားကွက်တွေကို စာတစ်ကြောင်းစီထားတာ markup ကုဒ်တွေကို ဖတ်ရှုရ လွယ်ကူစေပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေအတွက် အထက်ပါ ပုံစံနှစ်မျိုးစလုံးက အတူတူပဲ ပြသပေးမှာပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အကူအညီ:Wiki_Markup_ဖြင့်_ဇယားများထည့်ခြင်း_မိတ်ဆက်/၂&oldid=563654" မှ ရယူရန်
၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။